Fakan-tsary Mini Body Worn azo antoka miaraka amin'ny Encryption [Miaraka amin'ny efijery LCD] (BWC060) | Vahaolana OMG
2 Inch LCD - LCD 2 santimetatra ho an'ny filalaovana horonantsary, audio, sary ary fananganana fiteny mora kokoa, famahana ny horonan-tsary, kalitaon'ny sary, volume ary gps
Handefa rakitra 10 ora - Afaka mandray an-tsoratra 10 ora tsy tapaka izy io. Ho ampy amin'ny fampiasana isan'andro izany. Miaraka amin'ny mari-pamantarana bateria amin'ny LCD, azonao atao tsara ny mahafantatra ny androm-piainana sisa tavela
AES256 & RSA2048 Encryption - Ny horonan-tsary dia hohafaona indroa miaraka amin'ny AES256 sy RSA2048. Tsy afaka miditra amin'ireo horonantsary ireo ny besinimaro na dia manapotika ny fakantsary aza izy ireo. Ireo mpampiasa manana RSA Private Key ihany no afaka mijery ireo horonantsary
GPS mandeha amin'ny gorodona marina - Module GPS matanjaka namboarina, afaka mandray signal GPS izy ao anatin'ny 1 minitra. Azonao atao ny mandefa horonantsary miverina amin'ny GPS amin'ny MapVideo Player
Multi-Interface: HDMI / USB / AV - Manana HDMI, port USB, AV miditra / mivoaka, seranan-tsambo PTT sy asa hafa toa ny Laser Pointer, Flash Light
2 Inch LCD ho an'ny lahatsary, feo, sary ary haingam-pandeha kokoa, famoahana lahatsary, kalitao sary, volavola ary gps.
Handefa rakitra 10 ora
Afaka manoratra ora tsy tapaka mandritra ny ora 10 izy io. Ho ampy ho an'ny fampiasana isan'andro. Amin'ny fampiasana ny bateria amin'ny LCD, dia azonao atao tsara ny mahafantatra ny fiainan'ny batterie
Horonan-tsarimihetsika indroa miaraka amin'ny AES256 sy RSA2048 ny horonantsary. Tsy afaka miditra amin'ny horonantsary ny vahoaka na dia mamotika ny fakantsary aza izy ireo. Ny mpampiasa RSA Private Key ihany no afaka mijery ireo horonantsary
GPS mandeha amin'ny gorodona marina
Ny môtera lehibe GPS natsangana dia afaka mahazo GPS amin'ny kely kokoa noho ny 1 minitra. Azonao atao ny mijery video miaraka amin'ny GPS mandeha amin'ny MapVideo Player
Manana HDMI, port USB, AV ao / Out, PTT port ary asa hafa tahaka ny Laser Pointer, Flash Light
Video Resolution Fahaizana mamorona maromaro 2304x1286P (30 fps)
Audio Quality High Built-in Microphone
Water Mark Mpikambana ao amin'ny mpampiasa, Time sy Date fametrahana ao anaty video
Rakitsary LED Rindran-jazakely mavo
Activation Prompt Vibrator & Speaker & LED Indikator
Snapshot Fakana sary nandritra ny horonan-tsary
Karazana bateria Built-in Lithium Battery 3000mAH
mamaly ny Time 180 minitra
Kapoka azo antoka 16G / 32G / 64G / 128G
IR Light 2PCS 850nm infrarara LED mit wide Wide
Clip High Quality Metal Clip amin'ny 360 ° Rotation
Password Protection Mitaky ny tenimiafina hidirana amin'ny horonantsary
voromby Mode Fanohanana (Esory ny fampitandremana rehetra sy ny feo rehetra)
miasa Temperature -20 ° C ~ 60 ° C
Storage Temperature -25 ° C ~ 60 ° C
4891 Total Views 5 Views Today